DataNumen: Yakavanzika Mutemo
(A) Iyi Bumbiro
Mutemo uyu unoburitswa nemasangano akanyorwa muChikamu M pazasi (pamwe chete, “DataNumen"," Isu "," isu "kana" vedu "). Iyi Bumbiro inonyorerwa kune vanhu vari kunze kwesangano redu vatinosangana navo, kusanganisira vashanyi kumawebhusaiti edu (edu "maWebhusaiti"), vatengi, uye vamwe vashandisi veSevhisi (pamwe chete, "iwe"). Anotsanangurwa mazwi anoshandiswa muPolisi iyi anotsanangurwa muChikamu (N) pazasi.
Nezve zvinangwa zvePolisi iyi, DataNumen ndiye Mutungamiriri weZvako Dhata. Zvekutaurirana zvinopihwa muChikamu (M) pazasi peapplicable DataNumen sangano rinogona kupindura mibvunzo nezve mashandisirwo uye kugadzirisa kweako Dhata Dhata.
Iyi Bumbiro inogona kugadziridzwa kana kuvandudzwa nguva nenguva kuratidza shanduko mumaitiro edu zvine chekuita neKugadziriswa kweDunhu Dhata, kana shanduko muapplicabmutemo. Tinokukurudzira kuti uverenge Policy iyi zvakanyatsonaka, uye kugara uchiongorora peji ino kuti uongorore chero shanduko dzatingaite zvinoenderana nezviri muPolisi iyi.
DataNumen inoshanda pasi peiyo inotevera mhando: DataNumen.
(B) Kugadziridza rako reData
Unganidzo yeDunhu Dhata: Tinogona kuunganidza Dunhu rako nezve iwe:
Paunotibata nesu kuburikidza neemail, runhare kana neimwe nzira.
Mune yakajairika kosi yehukama hwedu newe (semuenzaniso, Dhata Yemunhu Pachedu yatinowana mukuita kwekubhadhara zvako).
Patinogamuchira yako Yega Dhata kubva kune vatatu mapato vanoitipa iyo, senge echikwereti mareferensi maajensi kana ekuteedzera emutemo mairesti.
Paunoshanyira chero mawebhusaiti edu kana kushandisa chero maficha kana zviwanikwa zviripo kana kuburikidza nemawebhusaiti edu. Paunoshanyira Webhusaiti, chishandiso chako uye bhurawuza rinogona kungoburitsa pachena humwe ruzivo (senge chishandiso mhando, sisitimu inoshanda, mhando yebrowser, marongero ebrowser, kero yeIP, marongero emitauro, misi uye nguva dzekubatanidza kune Webhusaiti uye nerumwe ruzivo rwehunyanzvi hwekutaurirana) , mamwe acho anogona kunge Akaumba Yega Dhata.
Paunotumira yako tangazve / CV kwatiri kunyorera basa.
Kugadzirwa kwePamoyo Dhata: Mukupa maSevhisi edu, isu tinogona zvakare kugadzira Yega Dhata pamusoro pako, senge zvinyorwa zvekudyidzana kwako nesu uye nhoroondo yeako odha nhoroondo.
Yakakodzera Dhata Yevanhu: Izvo zvikamu zvePamoyo Dhata pamusoro pako izvo isu zvatingaitise zvinosanganisira:
Zvepamoyo: zita (s); jenda; zuva rekuzvarwa / zera; nyika; uye mufananidzo.
Mashoko okukurukura: kero yekutumira (semuenzaniso, yekudzosa midhiya yepakutanga uye / kana zvishandiso zvekuchengetedza); postkero kero; nhamba dzerunhare; chikero chetsamba yemumhepo; uye nhoroondo yemagariro enhau.
Mashoko ekubhadhara: chikero chekunyorera; nhamba yeakaundi yebhangi kana nhamba yekadhi rechikwereti; kadhi kadhi kana zita remubati; kadhi kana nhoroondo yekuchengetedza account; kadhi 'inoshanda kubva' zuva; uye kadhi kupera musi.
Maonero uye maonero: chero maonero uye maonero aunosarudza kutumira kwatiri, kana pachena post nezvedu pamasocial media mapuratifomu.
Ndokumbira utarise kuti iyo Yega Dhata pamusoro pako yatinoita isu inogona zvakare kusanganisira Inonzwisisika Yega Dhata sekutsanangurwa pazasi.
Zvinotenderwa hwaro hwekugadzirisa Dunhu rako. Mukugadzirisa Dhairekitori Rako Pachako zvine chekuita nezvinangwa zvakatemwa muPolisi iyi, tinogona kuvimba nechimwe chete kana zvinopfuura zvezvinhu zviri pamutemo zvinotevera, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu:
isu takawana yako yekutanga mvumo yekuratidzira kune iyo Kugadziriswa (hwaro hwepamutemo hunongoshandiswa chete zvine chekuita neProcessing iyo yakazara zvachosetary - haina kushandiswa mukugadzirisa kunodiwa kana kusungirwa nenzira ipi neipi);
Kugadziriswa kwacho kunodiwa maererano nekontrakiti yaungapinda nesu;
iyo Kugadzira inodikanwa neapplicable law;
Kugadziriswa kwacho kwakakosha kuchengetedza izvo zvakakosha zvemunhu chero upi zvake; kana
isu tine kufarira kuri pamutemo mukuita Kugadziriswa nechinangwa chekugadzirisa, kushanda kana kusimudzira bhizinesi redu, uye kuti kufarira kuri pamutemo hakuratidzwe nezvido zvako, kodzero dzakakosha, kana rusununguko.
Kugadzira yako Inonzwisisika Yega Dhata. Hatitsvake kuunganidza kana neimwe nzira Gadzirisa yako Inonzwisisika Yega Dhata, kunze kwekunge:
Kugadziriswa kwacho kunodiwa kana kubvumidzwa neapplicabmutemo (semuenzaniso, kutevedzera zvisungo zvedu zvekuzivisa zvakasiyana);
Kugadziriswa kwacho kwakakosha pakuonekwa kana kudzivirira mhosva (kusanganisira kudzivirira kubiridzira, kubiridzira mari nekupa mari hugandanga);
Kugadziriswa kwacho kwakakosha mukumisikidza, kurovedza muviri kana kudzivirira kodzero dzepamutemo; kana
isu tine, zvinoenderana neapplicabmutemo, wakawana mvumo yako yepamberi usati wagadzirisa yako Inonzwisisika Yega Dhata (sezviri pamusoro, hwaro hwepamutemo uhwu hunongoshandiswa chete maererano neKushandisa kwakazara chosetary - haina kushandiswa mukugadzirisa kunodiwa kana kusungirwa neimwe nzira).
Kana iwe ukatipa Inonzwisisika Yega Dhata kwatiri (semuenzaniso, kana iwe ukatipa isu ne Hardware iyo iwe yaunoshuvira kuti tiwanezve data) unofanirwa kuona kuti zviri pamutemo kuti iwe utizivise data rakadai kwatiri, kusanganisira kuve nechokwadi chekuti imwe yepamutemo mabhesi yakatarwa pamusoro inowanikwa kwatiri nekuremekedza Kugadziriswa kweavo Vanonzwisisa Dhata reVanhu.
Zvinangwa zvatingaitise Zvako Dhata: Izvo zvinangwa zvatingaitise Zvako Dhata, zvichiteerana neapplicabmutemo, unosanganisira:
Yedu Webhusaiti: kushanda nekutarisira mawebhusaiti edu; kukupa zvemukati kwauri; kuratidza kushambadzira uye rumwe ruzivo kwauri kana iwe uchishanyira mawebhusaiti edu; uye kutaurirana nekudyidzana newe kuburikidza nemawebhusaiti edu.
Kupa kweMasevhisi: kupa mawebhusaiti edu uye mamwe maSevhisi; kupa maSevhisi mukupindura mirairo; uye kutaurirana maererano neaya maSevhisi.
Communications: kutaurirana newe nenzira ipi neipi (kusanganisira neemail, runhare, meseji, vezvenhau, post kana uri munhu) zvichienderana nekuona kuti nhaurwa dzakadai dzinopihwa kwauri zvichiteerana neapplicabmutemo.
Kutaurirana uye IT mashandiro: manejimendi eedu ekutaurirana masisitimu; kushanda kweIT kuchengetedzeka; uye IT kuchengetedzwa kwekuongorora.
Hutano nekuchengeteka: kuongororwa kwehutano nekuchengetedzwa uye kuchengetedza zvinyorwa; uye kutevedzera zvinosungirwa zviri pamutemo.
Management yemari: kutengesa; mari; kuongorora kwekambani; uye mutengesi manejimendi.
Ongororo: kubatana newe nechinangwa chekuwana maonero ako pane edu maSevhisi.
Kuvandudza masevhisi edu: kuratidza nyaya nemaSevhisi aripo; kuronga kuvandudzwa kweMabasa aripo; uye kugadzira maSevhisi matsva.
RweMabasa: manejimendi ezvikumbiro zvezvinzvimbo nesu.
Voluntary kupihwa kweDunhu Dhata uye mhedzisiro yekusapihwa: Kupa kweako Dhata Dunhu kwatiri kwatiri voluntary uye zvinowanzove chinhu chinodikanwa kuitira kuti upinde muchibvumirano nesu uye kuti tikwanise kuzadzisa zvisungo zvedu zvechibvumirano kwauri. Iwe hausi pasi pechisungo chepamutemo chekupa yako Yega Dhata kwatiri; zvisinei, kana iwe ukasarudza kusatipa iwe neDunhu rako Dhata, hatizokwanise kupedzisa hukama hwechibvumirano newe uye kuzadzisa zvisungo zvedu zvechibvumirano kwauri.
(C) Kuzivisa kweYako Dhata kune wechitatu mapato
Tinogona kuzivisa yako Yega Dhata kune mamwe masangano mukati DataNumen, kuti tizadzise zvisungo zvedu zvechibvumirano kwauri kana zvebhizinesi zviri pamutemo (kusanganisira kupa maSevhisi kwauri nekushandisa mawebhusaiti edu), zvinoenderana neapplicabmutemo. Uye zvakare, isu tinogona kuzivisa yako Yega Dhata ku:
zvepamutemo nekutonga zviremera, pachikumbiro, kana nechinangwa chekumhan'ara chero chaiko kana kufungidzirwa kutyora kweapplicabmutemo kana mutemo;
maakaundendi, ma Auditor, magweta nevamwe vekunze vanachipangamazano vanachipangamazano DataNumen, zvichitarisirwa pakusunga zvibvumirano kana zvisungo zviri pamutemo zvekuvanzika;
yechitatu bato maProsesa (senge vanobhadhara masevhisi, makambani anotumira / anotakura; vatengi vetekinoroji, vatengi vanogutsa vanoongorora, vashandisi ve "live-chat" masevhisi uye mapurosesa ayo anopa mabasa ekuteerera akadai sekutarisa hurumende yakaburitsa zvinyorwa zvakarambidzwa, senge Hofisi yeUS Kunze Kwe Asset Kudzora), iri chero kupi pasi, zvichienderana nezvinodiwa zvataurwa pazasi muchikamu chino (C);
chero bato rakakodzera, vanoita zvekuchengetedzwa kwemutemo kana dare, kusvika padanho rakafanira rekumisikidza, kushandisa kana kudzivirira kodzero dzepamutemo, kana chero chikamu chakakodzera nechinangwa chekudzivirira, kuferefeta, kuona kana kutongesa mhosva dzematsotsi kana kupiwa kwezvirango zvematsotsi;
chero anokodzera wechitatu anowana (s), muchiitiko chekuti isu tinotengesa kana kuendesa zvese kana chero chikamu chakakodzera chebhizinesi redu kana zvinhu (kusanganisira muchiitiko chekurongazve, kuputsa kana kudzima), asi chete maererano neapplicable law; uye
mawebhusaiti edu anogona kushandisa zvemukati bato. Kana iwe ukasarudza kudyidzana nechero zvakadaro zvemukati, yako Pachezvako Dhata inogona kugovaniswa neyechitatu bato mupi weanoshanda enhau midhiya chikuva. Tinokurudzira kuti uongorore zvakavanzika zvemumwe munhu zvisati zvabatana nezviri mukati.
Kana isu tikabatanidzira wechitatu-bato Prosesa Kugadziridza rako reDunhu, isu tinopedzisa chibvumirano chekugadzirisa dhata sezvinodiwa neapplicable mitemo neiyi yechitatu-bato processor kuti iyo processor ichava pasi pekusunga zvibvumirano zvechisungo kune: (i) chete Kugadzirisa Iyo Yega Dhata maererano nemirairo yedu yekutanga yakanyorwa; uye (ii) shandisa matanho ekuchengetedza zvakavanzika uye kuchengetedzeka kwePamoyo Dhata; pamwe nezvimwe zvinowedzerwa pasi peapplicabmutemo.
Tinogona kusazivisa Dunhu rako nezve mashandisiro emaWebhusaiti (semuenzaniso, nekunyora data rakadaro muchimiro chakabatanidzwa) uye nekugovana data rakadai risingazivikanwe nevatinoshanda navo bhizinesi (kusanganisira vechitatu vezvebhizinesi vatinoshanda navo).
D) Kuendesa pasi rese kweDunhu Dhata
Nekuda kwehunhu hwepasi rose hwebhizinesi redu, isu tingangoda kuendesa yako Yega data mukati me DataNumen Boka, uye kune vechitatu mapato sezvakataurwa muChikamu (C) pamusoro, maererano nezvinangwa zvakatemwa muPolisi iyi. Nechikonzero ichi, tinogona kuendesa rako Rako Dunhu kune dzimwe nyika dzinogona kunge dziine yakaderera zviyero zvekuchengetedza dhata pane iyo EU nekuda kwemitemo yakasiyana uye kuchengetedzwa kwedata kutevedzera zvinodiwa kune izvo zvinoshanda munyika yauri iwe.
Kwatinoendesa Dunhu rako pachako kune dzimwe nyika, tinozviita, pazvinodiwa (uye kunze kwekuchinjirwa kubva kuEEA kana Switzerland kuenda kuUS) pachishandiswa Standard Contractual Clauses. Iwe unogona kukumbira kopi yeedu Standard Chibvumirano Zvikamu uchishandisa iwo manhamba ekutaurirana akapihwa muChikamu (M) pazasi.
(E) Kuchengetedzwa kweData
Isu tashandisa matanho akakodzera ehunyanzvi uye esangano ekuchengetedza matanho akagadzirirwa kuchengetedza yako Pachezvako kukuvara netsaona kana zvisiri pamutemo, kurasikirwa, kushandurwa, kuburitswa kusingabvumirwe, kuwanikwa zvisina mvumo, uye dzimwe nzira dzisiri pamutemo kana dzisiri pamutemo dzeProcessing, zvinoenderana neapplicabmutemo.
Iwe une basa rekuona kuti Chero rako reDunhu raunotumira kwatiri rinotumirwa zvakachengeteka.
(F) Kurongeka kweData
Isu tinotora nhanho dzese dzakaringana kuona kuti:
yako Yemunhu Dhata iyo isu Maitiro iri echokwadi uye, pazvinenge zvichidikanwa, yakaramba ichionekwa parizvino; uye
chero chako Chako Dhairekitori icho isu Maitiro chisina kururama (zvine chekuita nezvinangwa zvaZvakagadziriswa) zvinodzimwa kana kugadziriswa pasina kunonoka.
Nguva nenguva tinogona kukukumbira kuti usimbise kunyatso kweData rako.
(G) Kuderedza Dhata
Isu tinotora nhanho dzese dzakaringana kuona kuti yako Yega Dhata iyo isu Maitiro inoganhurirwa kune Yega Dhata inodiwa zvine mutsindo zvine chekuita nezvinangwa zvakatemwa muPolisi iyi (kusanganisira kupihwa kweMasevhisi kwauri).
(H) Kuchengetwa kweData
Isu tinotora nhanho dzese dzakaringana kuona kuti yako Yega Dhata inongogadziriswa kwenguva shoma inodiwa kuitira zvinangwa zvakatemwa muPolisi iyi. Tichachengeta makopi eData rako pachako mune fomu inobvumidza kuzivikanwa chete kwenguva yakareba se:
tinochengetedza hukama huripo newe (semuenzaniso, paunenge uri mushandisi wemasevhisi edu, kana iwe zviri pamutemo unowanikwa mune yedu tsamba yekutumira uye hauna kuzvinyoresa); kana
Dhata rako reChako rinodikanwa maererano nezvinangwa zviri pamutemo zvakatemwa muPolisi iyi, yatinowana hwaro hwepamutemo (semuenzaniso, panowanikwa dhata rako pachako muhurongwa hwakaiswa newaunoshandira, uye isu tinofarira zviri pamutemo kugadzirisa iyo data yezvinangwa zvekushandisa bhizinesi redu uye kuzadzisa zvisungo zvedu pasi pesungano iyoyo).
Pamusoro pezvo, isu tinochengeta Dunhu rako pachako kwenguva ye:
chero applicabnguva yekumisikidzwa pasi peapplicable mutemo (kureva. uye
imwezve miviri (2) yemwedzi nguva zvichitevera kupera kwemaappli akadarocabnguva yekumisikidza (kuitira kuti, kana munhu akaunza chikumbiro panopera nguva yekumisikidza, isu tichiri kupihwa nguva inokwana nguva yekuziva chero Dhata Yemunhu inoenderana nechikumbiro ichocho,
Kana zvikaitika kuti zvirevo zvipi zvapamutemo zvinounzwa, tinogona kuenderera mberi nekugadzirisa Dhairekitori rako reZvimwe nguva dzakadai sezvinodiwa maererano nechikumbiro ichocho.
Munguva dzakatarwa pamusoro apa maererano nepamutemo zvirevo, tichaganhurira Kugadziriswa kweDunhu rako pachako kuchengetedza, uye kuchengetedza kuchengetedzeka kwePamoyo, kunze kwekunge padanho rekuti Dunhu Rekuda riongororwe maererano nechero ipi kudanwa kwepamutemo, kana chero chisungo pasi peapplicabmutemo.
Kamwe nguva dziri pamusoro, imwe neimwe kusvika pakushandisacable, takagumisa, tichabvisa zvachose kana kuparadza akakodzera Dhata Yomunhu.
(I) Kodzero dzako dzepamutemo
Zvichienderana neapplicabMutemo, iwe unogona kuve nekodzero dzinoverengeka maererano neKugadziriswa kweZvako Dhata, kusanganisira:
kodzero yekukumbira kuwana, kana makopi eData rako Pachedu ratinoita kana kugadzirisa, pamwe neruzivo maererano nemasikirwo, kugadziriswa uye kuburitswa kweavo Dhata Yemunhu;
iyo kodzero yekukumbira kugadziriswa kwechero chipi chisina kukodzera muPamoyo chako Chatinotungamira kana kudzora;
kodzero yekukumbira, pazvikonzero zviri pamutemo:
kudzima kweRako Dhata Dhata ratinoita kana kugadzirisa;
kana kurambidzwa kweProcessed yeako Dunhu Dhata yatinoTungamira kana kudzora;
kodzero yekupokana, pazvikonzero zviri pamutemo, kuKugadziriswa kweData rako reDu nesu kana panzvimbo yedu;
kodzero yekuve neyako Dhata Dhata yatinogadzirisa kana kudzora kuendeswa kune mumwe Mutongi, kusvika padanho rekushandisacable;
iyo mvumo yekubvisa yako mvumo kuProcessing, uko kutenderwa kwekugadzirisa kunoenderana nemvumo; uye
kodzero yekuisa zvichemo neData Kudzivirira Chiremera maererano neKugadziriswa kweDunhu rako reDu kana nesu kana isu.
Izvi hazvikanganise kodzero dzako dzepamutemo.
Kuti ushandise imwe kana dzakawanda dzekodzero idzi, kana kubvunza mubvunzo nezve kodzero idzi kana chero kupihwa kupi kweiyi Gwara, kana nezve Kugadziriswa kweData rako reChako, ndapota shandisa ruzivo rwekufonera rwakapihwa muChikamu (M) pazasi.
Kana isu tiri kukupa iwe neMasevhisi zvichienderana nemirairo, kwakadai kupihwa kweMasevhisi kunoitwa nemitemo yechibvumirano yawakapihwa. Kana paine kusawirirana pakati pematemu akadaro nePolice iyi, ino Sisitimu inofanirwatary.
(K) Mitemo yekushandisa
(L) Kutengesa Kwakananga
Zvichienderana neapplicabmutemo, kwawakapa mvumo yakajeka maererano nemaapplicabMutemo kana kwatinokutumira kushambadzira nekushambadzira kutaurirana zvine chekuita nezvezvigadzirwa nemasevhisi edu akafanana, tinogona Kugadzirisa Dhata rako Pachedu kuti ubate newe kuburikidza neemail, runhare, tsamba yakananga kana mamwe mafomati ekutaurirana kuti akupe ruzivo kana maSevhisi anogona kunge ari yekufarira iwe. Kana isu tikakupa Sevhisi kwauri, tinogona kutumira ruzivo kwauri maererano neMasevhisi edu, kukwidziridzwa kuri kuuya uye rumwe ruzivo rwungangonakidze iwe, tichishandisa ruzivo rwekuonana rwawakatipa uye nguva dzose tichiteerera appli.cabmutemo.
Unogona kuzvinyoresa kubva kushambadziro redu reemail kana tsamba dzetsamba chero nguva nekungodzvanya pane chisina kuzvibatanidza chinosanganisirwa mune yega email kana tsamba yetsamba yatinotumira. Mushure mekurega kuzvinyoresa, hatizokutumirezve mamwe maemail, asi isu tinogona kuramba tichikurukura newe kusvika padanho rakakodzera kuitira chero maSevhisi awakumbira.
Kana iwe uine chero zvataurwa, mibvunzo kana kunetsekana nezve chero cheruzivo mune ino Policy, kana chero imwe nyaya ine chekuita nekugadziriswa kwePamoyo Dhata na DataNumen, ndapota taura nesu.
'Mutungamiriri' zvinoreva chinongedzo chinosarudza kuti sei uye nei Dhata Yemunhu Yakagadziriswa. Mumatunhu mazhinji, Mutungamiriri ane basa rekutanga kutevedzera applicabmitemo yekuchengetedza data.
'Dziviriro Dziviriro Chiremera' zvinoreva chiremera chakazvimirira cheveruzhinji chakapihwa zviri pamutemo basa rekutarisa kutevedzera applicabmitemo yekuchengetedza data.
'EEA' zvinoreva iyo European Economic Area.
'Pachedu Dhata' zvinoreva ruzivo rwune chekuita chero munhu, kana kunobva kune chero munhu kuzivikanwa. Mienzaniso yeDzemunhu Dhata yatinogona Maitiro inopihwa muChikamu (B) pamusoro.
'Maitiro', 'Kugadzira' kana 'Kugadziriswa' zvinoreva chero chinhu chinoitwa nechero Dhata Yevanhu, kungave kana kwete nenzira dze otomatiki, senge kuunganidzwa, kurekodha, kuronga, kurongedza, kuchengetedza, kuchinjisa kana kuchinjisa, kudzosa, kubvunza, kushandisa, kuburitsa pachena nekutepfenyura, kufambisa kana kuita kuti zviwanikwe, kuenderana kana kusanganisa, kudzora, kudzima kana kuparadza.
'Processor' zvinoreva chero munhu kana chinzvimbo icho Chinogadzirisa Yega Dhata pachinzvimbo cheMutongi (kunze kwevashandi veMutongi).
'Mabasa' zvinoreva chero mabasa anopiwa ne DataNumen.
'Inonzwisisika Yega Dhata' zvinoreva Dunhu rako pachako nezve rudzi kana dzinza, maonero ezvematongerwo enyika, zvechitendero kana zvefilosofi, nhengo yemubatanidzwa, hutano hwepanyama kana hwepfungwa, hupenyu hwepabonde, chero mhosva chaidzo kana mhosva dzinoparwa, chirango chenyika, kana chero rumwe ruzivo rwunganzi Iva nehanya pasi peapplicabmutemo.